Ahoana ny fampahalalam-baovao?
Azo antoka fa ao am-balafon'ny olona tsirairay dia misy zavatra maivana izay nahavita nanova ny loko tany am-boalohany ary lasa fotsy sy tsy misy ilàna azy. Inona no tokony hatao amin'ny toe-javatra toy izany? Adinoy ny akanjo tianao indrindra na manaiky ny fahadisoany? Sa angamba miezaka mamerina azy ireo ny fahalevena taloha? Raha toa ilay safidy farany izay tianao kokoa noho ianao, dia hanampy anao ny mianatra ny fomba hanaleo ireo fotsy fotsy ary hiaro ny lokon'ny fery.
Ahoana ny fampandroana ireo zavatra efa nototoina?
Ny olana mampikorontan-tsaina indrindra izay mety hahatratra ny akanjo fotsy dia manasa amin'ny zavatra miloko manjavozavo izay manahirana amin'ny fandosirana. Amin'io tranga io, ny fotsy hoditra malalanao dia mety ho menamena manjelanjelatra na menamena maloto, fa ny loko kosa dia mety ho tsy misy fanamiana, fa spots. Inona no tokony ataoko? Tsara kokoa ny fampiasana ny bleach. Saingy alohan'ny hamelanao ireo zavatra amin'ny fahadiovana, dia eritrereto ireto hevi-dehibe ireto:
Ny singa metaly dia tsy maintsy esorina alohan'ny hisasana, raha tsy izany dia hialany sasatra mafonja izy ireo;
Aza arofanina mivantana amin'ny lamba, raha tsy izany dia handoro zavatra ianao;
tahaka ny fitoeran-drano, mampiasa plastika na alimo kely;
Esory ny fofona amin'ny fantsona misy ranom-pifamoivoikan'ny peroxyde rano na toeram-pofona iray izay nampidirina nandritra ny fantsona.
Ankehitriny ny momba ny fomba fanasana. Mamelatra ny fotsy amin'ny rano mafana ary mandatsaka ny vahaolana amin'ny akanjo. Avelao ny zava-drehetra mandry ao anaty rano mandritra ny 40 minitra, ary avy eo izy ireo dia mila hosasana amin'ny rano mangatsiaka.
Fomba nentim-paharazana amin'ny fijanonana
Raha tsy misy fotsy, dia azo ampiasaina ny fomba fanasana hafa. Ohatra:
Boric acid . Asio ranom-boasary ao anaty valizy ary asio ranony 2 boribory boribory . Mialà ao anaty rano mandritra ny ora roa. Aorian'izany, dia manasa ny akanjonao amin'ny fomba mahazatra. Ity fomba fanao ity dia tsara kokoa ampiasaina amin'ny ba kiraro sy ny lobaka.
Manganese . Ao anatin'ny 10 litatra ny rano mafana dia mamela kely ny permanganate potassium (ny rano dia tokony ho mavomavo maitso) ary vera iray giro. Apetraho ao anaty rano izay efa nanasa akanjo ary miandry ny fanadiovana tanteraka ny rano. Atsofohy ny zavatra ary afoy amin'ny masoandro. Hianjera avy hatrany ny jiro!
Peroxide ao anaty rano . Io fanafody io koa dia manampy amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny fotsy amin'ny fahantony sy ny fahatsarany. Koa, ahoana ny fampandroana zavatra amin'ny alalan'ny peroxyde hydrogène? Mba hanaovana izany dia tokony hesorinao ny vovo 3% amin'ny rano (1/2 tsp ka hatramin'ny 1 litatra amin'ny rano) ary mandritra ny 30 minitra dia hampidina ny akanjo fitaratra amin'ny vahaolana enti-manana. Mba hanatsarana ny vokatra dia afaka manampy soda sotro ianao.
Ahoana ny fomba hanasana ny ranomainty amin'ny rindrina?
Ahoana ny fomba hanasana fotsy hoditra?
Ahoana ny famelana volafotsy?
Ahoana no hanesorana ny fofom-pofon'ny saka?
Ny alèin'ny masoandro - aretina, fitsaboana
Ahoana no ahafahan'ny aty?
Kaitlin Jenner manomana fanandramana ankapobeny ao amin'ny bokiny autobiographical "The Secrets of My Life"
Tanora-mpampihorohoro: ny famonoana olona maro manafintohina indrindra any an-tsekoly
Ny fanitarana ny volo amin'ny volo fohy - ny fomba tsara indrindra hanitarana ny voankazo
Fanasan 'ny fampakaram-bady
Firy no miaina voalavo matevina?
Dresses avy amin'i Olga Nikishicheva
Ny fisehoan-javatra voalohany eo ampelatanan'ny Printsy Harry sy Megan Markle amin'ny 2018